ဓားထိုးမှု – Eleven Media Group
မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက်၌ လူငယ်အချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ကြရာမှ ဓားထိုးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ဦး သေဆုံးကာ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
Posted on September 11, 2018 by ဘိုဘိုမြင့်
မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက် (၁၁) လမ်း အောက်ပိုင်း၌ စက်တင်ဘာ ၉ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲခန့် က လူငယ်အချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ကြရာမှ ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ဦးသေဆုံးကာ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက် (၉) လမ်း အောက်ပိုင်းနေ မောင်မျိုးခန့်နောင် (၁၈) နှစ် (ဘ) ဦးရန်နောင်စိုး၊ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက် (၁၀) လမ်း အောက်ပိုင်းနေ မောင်ကြည်နိုင်ထွေး (၁၇) နှစ် (ဘ) ဦးကြည်ဝင်းနှင့် တခြားလူငယ် တစ်ဦးတို့မှာ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက် (၁၁) လမ်း အောက်ပိုင်းတွင် စက်ဘီးတွန်း၍ လမ်းလျှောက်လာနေစဉ် မော်လမြိုင်မြို့ ရွှေတောင်ရပ်ကွက် အောက်လမ်းမကြီး၌ နေထိုင်သူများ ဖြစ်သည့် ထက်ဝေစိုး (၂၁) နှစ် (ဘ) ဦးမြင့်အောင်၊ ကောင်းထက် (၂၃) နှစ် (ဘ) ဦးစိန်ဝင်း၊ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက် (၁၁) လမ်းအောက်ပိုင်းနေ ထွန်းထွန်းဝင်း (၁၈) နှစ် (ဘ) ဦးကျော်ဝင်ထွန်းတို့ သုံးဦး မောင်းနှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်၏ မီးရောင်မှာ ၎င်းတို့မျက်နှာအား မီးရောင်လာထိုး၍ မောင်မျိုးခန့်နောင် က ဆဲဆိုလိုက်သဖြင့် ထက်ဝေစိုး၊ ကောင်းထက်၊ ထွန်းထွန်းဝင်းတို့ သုံးဦးနှင့် မောင်မျိုးခန့်နောင်တို့ သုံးဦးတို့မှာ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပြီး ထက်ဝေစိုးက မောင်မျိုးခန့်နောင်နှင့် ကြည်နိုင်ထွေးတို့အား ဓားဖြင့် ထိုးပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း၊ ထိုသို့ ဓားဖြင့် ထိုးခြင်းကြောင့် မောင်မျိုးခန့်နောင်တွင် ဘယ်ဘက်ညှပ်ရိုးအောက် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ မောင်ကြည်နိုင်ထွေးတွင် ဘယ်ဘက် ရင်အုံ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီး မောင်မျိုးခန့်နောင်မှာ ရရှိသော ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားကြောင်း မုပွန်နယ်မြေ ရဲစခန်းထံမှ သိရသည်။
“ညက စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ဓားထိုးမှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ညတွင်းချင်းပဲ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မတွေနဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူထားပါတယ်”ဟု မုပွန်နယ်မြေရဲခစန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထက်ဝေစိုး၊ ကောင်းထက်၊ ထွန်းထွန်းဝင်းတို့ သုံးဦးအပေါ် မုပွန်နယ်မြေရဲစခန်းမှ (ပ) ၈၀၁/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ – ၃၀၂/ ၁၁၄/ ၃၂၆ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted in NewsTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်ရပ်ကွက်၌ လူငယ်အချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ကြရာမှ ဓားထိုးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ဦး သေဆုံးကာ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
အလှူခံ ရရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရာမှ သီလရှင်တစ်ပါးက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အား ဓားဖြင့်ထိုးမှုဖြစ်ပွား
Posted on August 28, 2018 August 28, 2018 by သက်ထွန်းအောင်
အလှူခံရရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရာမှ သီလရှင်တစ်ပါးက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အား ဓားဖြင့်ထိုးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
သြဂုတ် ၂၆ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့်က စစ်ကိုင်းမြို့ မီးရထားရပ်ကွက် ပင်စင်ကုန်းရပ် ဇေယျမင်္ဂလာ အောင်ချမ်းသာကျောင်းတိုက်အတွင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နှင့် အဆိုပါ ကျောင်းဝင်းအတွင်း သီတင်းသုံး နေထိုင်သော သီလရှင်တစ်ပါးတို့ အလှူခံရရှိသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ သီလရှင်က အရိုးအသွား ၁၀ လက်မခန့်ရှိ ကော်ရိုးတပ် စတီးဓားဖြင့် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်၏ ၀ဲဘက်နံဘေးအား ထိုးသွင်းခဲ့ကြောင်း ရဲမှုခင်းမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သီလရှင် ဒေါ်စန္ဒာသီရိ၊ ၀ါတော် ၂၆ ၀ါ၊ အသက် (၄၈ နှစ်) အား သက်ဆိုင်ရာ သာသနာအဖွဲ့က လူဝတ်လဲကာ စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ) ၆၂၉/၁၈ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၆ ဖြင့် ဖမ်းဆီး အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on အလှူခံ ရရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရာမှ သီလရှင်တစ်ပါးက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အား ဓားဖြင့်ထိုးမှုဖြစ်ပွား
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွင် ညအချိန်မတော် ရပ်ကွက်အတွင်း ဆူညံခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ပြောဆိုသည့် ဆယ်အိမ်မှူး ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ခံရ
Posted on July 30, 2018 July 31, 2018 by သက်ထွန်းအောင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွင် ညအချိန်မတော်ရပ်ကွက်အတွင်း ဆူညံခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ပြောဆိုသည့် ဆယ်အိမ်မှူးဖြစ်သူ ဓားဖြင့်အထိုးသတ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၃၀ ရက်က မြို့မ ရဲစခန်း(သပိတ်ကျင်း)မှ သိရသည်။
“တရားခံကောင်လေးကို သင်တန်းတက်ဖို့ တပ်ကနေ လွှတ်လိုက်တာ။ သင်တန်းမသွားဘဲနဲ့ သူ့မိဘတွေဆီသွားနေတာ။ အဲဒီညမှာ ကောင်လေးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂီတာတီး အရက် သောက်ပြီးပြန်လာတော့ အချိန်က ညဉ့်နက်တယ်။ ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အမေက ညဉ့်နက်မှပြန်လာလို့ ဆူတာပေါ့။ မိဘကို စိတ်ဆိုးပြီးတော့ ကလန်ကဆန်ပြန်ပြောတယ်။ အမေဖြစ်သူက အိမ်ထဲမှာ သားဖြစ်သူက ခြံထဲမှာ။ အပေါ်အောက် စကားတွေ များကြ။ အပြန်အလှန် ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ ညဉ့်နက်နေတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆူညံနေတာ။ ဆယ်အိမ်မှူးက သွားပြီးထိန်းတာ။ ဆယ်အိမ်မှူးက သူ့ကိုဆူလို့ဆိုပြီး ၀ါးလုံးနဲ့ တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်။ ကောင်လေးက စိတ်ဆိုးပြီးတော့ သူ့ခါးမှာရှိတဲ့ ဓားမြှောင်နဲ့ လိုက်ပြီးထိုးတာ။ ဓားက ၁၀ လက်မခန့်ရှိပါတယ်။ဆယ်အိမ်မှူးကတော့ သေသွားတယ်။ တရားခံကိုဖမ်းပြီး တပ်ကို ပြန်လွှဲလိုက်ပါတယ်” ဟု မြို့မရဲစခန်း (သပိတ်ကျင်း)မှ ခေတ္တစခန်းမှူး ရဲအုပ်မျိုးမင်းလွင်က ဆိုသည်။
Posted in NewsTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွင် ညအချိန်မတော် ရပ်ကွက်အတွင်း ဆူညံခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ပြောဆိုသည့် ဆယ်အိမ်မှူး ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ခံရ
အောင်လံမြို့ အထက (၃) ရွာထောင်အထက်တန်းကျောင်းတွင် န၀မတန်းကျောင်းသားချင်း စနောက်ရာမှတစ်ဆင့် ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား
Posted on July 9, 2018 July 10, 2018 by သက်ပိုင်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် အောင်လံမြို့ အထက (၃) ရွာထောင် အထက်တန်းကျောင်းတွင် န၀မတန်းကျောင်းသားချင်း စနောက်ရာမှတစ်ဆင့် ဓားထိုးမှု ဇူလိုင် ၉ ရက် နေ့လည်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရွာထောင်အထက်တန်းကျောင်း န၀မတန်း ဘောဂဗေဒ ဘာသာတွဲ သင်ကြားနေသည့် အခန်း (E) နေသူ ကျောင်းသားမောင် …. သည် တစ်ခန်းတည်း အတူနေကျောင်းသား မောင်…အား နေ့လည်ထမင်းစား ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် နောက်ပြောင်ပြီး ဦးခေါင်းအား လက်သီးဖြင့် နှစ်ချက်ထုခဲ့ကြောင်း ရဲစခန်း တိုင်တန်းချက်များအရ သိရသည်။
ယင်းသို့ လက်သီးဖြင့် နှစ်ချက်ထုခဲ့သဖြင့် မောင်….မှ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ကျောင်းပြန်တတ်ချိန်တွင် ကိုးတန်းကျောင်းဆောင်နှင့် ၁၀ တန်းကျောင်းဆောင်ကြားတွင် မောင် . . . . အား အရိုးအသွား ခြောက်လက်မခွဲခန့်ရှိသည့် ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ကြောင်း အောင်လံမြို့မရဲစခန်း၏ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းချက်များအရ သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် ကျောင်းသား မောင်….အား အရေးယူပေးရန် မောင်…. ၏ မိခင်မှ ရဲစခန်းတွင် လာရောက် တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားချက်များအရ သိရသည်။
“ကလေးတွေက ၁၄ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်အရွယ်တွေပါ။ စရင်းနောက်ရင်းကနေ အခုလို ဒေါသအလျောက် ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဓားနဲ့အထိုးခံရတဲ့ကလေး ဒဏ်ရာတွေ ကနဦးသတင်းတွေအရ မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ လက်ရှိတော့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရပါတယ်” ဟု အောင်လံမြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် ကျောင်းသားအား မိဘလက်သို့ အပ်နှံထားပြီး ရဲစခန်းမှ ဆက်လက်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိဖြစ်ကြောင်း ရွာထောင်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွာထောင်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက “စရင်း နောက်ရင်းနဲ့ သွေထွက်သံယို ဖြစ်သွားတာပါ။ ခံရတဲ့ ကလေးကတော့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံနေရပါတယ်။ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ ကလေးကိုတော့ ကျောင်းကနေ မိဘလက်ထဲကို အပ်လိုက်ပါတယ်။ အခုစခန်းထဲမှာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်” ဟုပြောကြားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အောင်လံမြို့နယ်ရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on အောင်လံမြို့ အထက (၃) ရွာထောင်အထက်တန်းကျောင်းတွင် န၀မတန်းကျောင်းသားချင်း စနောက်ရာမှတစ်ဆင့် ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား
ထားဝယ်မြို့ပေါ်တွင် နေအိမ်ပေါ်၌ အိပ်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့်ဝင်ရောက် ထိုးသတ်ပြီး ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွား
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့ပေါ်ရှိ ပုံကျွန်းရပ်ကွက် သမာဓိလမ်း (ကြခတ်ပင်ကျောင်းလမ်း) ပေါ်၌ ဧပြီ ၂၆ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က နေအိမ်ပေါ်၌ အိပ်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့်ဝင်ရောက် ထိုးသတ်ပြီး ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်အချိန်မှာ နံနက်၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နေအိမ်ပေါ်၌ တစ်ဦးတည်း အိပ်ပျော်နေစဉ် ကြက်သွန်လှီးဓားဖြင့် အထိုးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သုံးထပ်ရှိ နေအိမ်၏ ဒုတိယထပ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အခင်းဖြစ်ပွားသည့် အချိန်တွင် နေအိမ်၌ဓားဖြင့် အထိုးခံခဲ့ရသည့် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းသာ ရှိနေချိန်ဖြစ်ပြီး ဓားဖြင့် အထိုးခံရမှုကြောင့် မြ၀တီဘဏ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် မအေးစုလွင်တွင် လည်ပင်းဝဲဘက်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ယာလက်ခုံပြတ်ရှ ဒဏ်ရာတစ်ချက်နှင့် ၀မ်းဗိုက်ဝဲဘက်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာသုံးချက်ဖြင့် ထားဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ (စိုးရိမ်ရ) အဖြစ် ကုသမှုခံယနေရကြောင်း ထားဝယ်မြို့မရဲစခန်းမှရရှိသည့် မှုခင်းမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာခေါ်တဲ့အချိန်ဆို မနက် ၃ နာရီထိုးပြီးပြီ။ အိမ်မှာ ဓားထိုးခံရလို့ဆိုပြီး လာခေါ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာမေးတော့ ကြခတ်ပင်ကျောင်းလမ်းထဲမှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက A-2 ကား ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုက်သွားတော့ လူနာက အိမ်အောက်ရောက်နေပြီ။ သူ့ဘာသာ ဆင်းလာပြီးတော့ ခုံတန်းရှည်မှာ ထိုင်နေတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒဏ်ရာက သွေးတအားထွက်နေပြီး ဘယ်ဘက်ဗိုက်က ထိုးသွင်းဒဏ်ရာသုံးချက်မှာ အထဲက ကလီစာနဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းအချို့ ထွက်နေပြီ။ လည်ပင်းမှာလည်း သုံးလက်မလောက် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ညာဘက်လက်ဖမိုးမှာ ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက် ရှိနေတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က သွေးတိတ်အောင် အရင်လုပ်ပြီး ဆေးရုံကို ပို့လိုက်တာပေါ့။ ဆေးရုံရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူသတိတော့ ကောင်းနေတယ်။ မေးတာတွေ တော်တော်များများ သူဖြေနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သူ့ကိုသိပ်မဖြေခိုင်းဘူး။ စကားများများပြောရင် ညှစ်ထုတ်သလို ဖြစ်မှာစိုးလို့။ သူ ပြောနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပြောလိုက် နားလိုက်နဲ့ တရားခံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ မေးတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအိမ်မှာ အတူနေတဲ့ ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူက ခရီးထွက်သွားလို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်း ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ” ဟု ဇမ္ဗူသီရိ အရေးပေါ်လူနာအခမဲ့ သယ်ယူရေးအဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်မျိုးသွင်က ပြောကြားသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်အချိန်မှာ နံနက် ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့ထံ လာရောက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ အကြောင်းကြားပေးခဲ့ကြောင်း၊ လူနာအား ထားဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ပေးခဲ့ပြီးနောက် လိုအပ်သည့် သွေးနှင့်အရေးပေါ် ကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးထားခဲ့ပြီး ၎င်းရှိနေသည့် နံနက် ၆ နာရီခွဲထိ ခွဲစိတ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ကိုနိုင်မျိုးသွင်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ နေအိမ်ပေါ်၌ အိပ်နေစဉ် ဓားဖြင့်အထိုးခံခဲ့ရသော မိန်းကလေးအား မေးမြန်းရာ၌ ကျူးလွန်သူမှာ နေအိမ်နောက်ဘေးဘက်မှ ၀င်ရောက်လာသည့် ပုံစံရှိပြီး အိပ်ရာမှနိုး၍ ကြည့်လိုက်သည့်အချိန်တွင် လူတစ်ဦးမှာ ၎င်း၏နံဘေးသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့် အော်ဟစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ အော်ဟစ်ရာ ကျူးလွန်သူက မအော်ရန်ပြော၍ ပါးစပ်ကို လက်ဖြင့်ပိတ်ကာ လည်ပင်းအား ဓားဖြင့် လှီးခဲ့သောကြောင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ၎င်း၏ ဗိုက်အား ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ကာ နေအိမ်၏ ဒုတိယထပ် အခန်းအရှေ့ဘက်မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သူက ၀မ်းဗိုက်အား ထိုးခဲ့သည့်ဓားကို မိန်းကလေးက လုယူထားခဲ့သဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ကျူးလွန်သူမှာ အပေါ်တွင် အပြာရောင်ဂျင်းအင်္ကျီနှင့် အောက်တွင် အနက်ရောင်ဘောင်းဘီ ၀တ်ဆင်ထားကာ နှာခေါင်းပိတ် တပ်ထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဓားဖြင့်အထိုးခံသူက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကိုနိုင်မျိုးသွင်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မအေးစုလွင်အား နေအိမ်ပေါ် တက်ရောက်ပြီး ဓားဖြင့်ထိုးသူကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးရန် အဘိုးဖြစ်သူ ဦးဆန်းရွှေက တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် ထားဝယ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ)၇၆၄/ ၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၅၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ထားပြီး တရားခံဖြစ်သူအား ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် စုံစမ်းနေကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၂၆ ရက် ညနေ ၄ နာရီအထိ နောက်ဆုံးရရှိထားသော သတင်းအရ ထားဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ထားသောဓားဖြင့် အထိုးခံသူအမျိုးသမီးမှာ ရရှိထားသော ဒဏ်ရာများအား မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲမှစတင်၍ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထားဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခွဲစိတ်ကုသဆောင်တာဝန်ခံ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်မြင့်က ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက် ညကလည်း ထားဝယ်မြို့ရှိ ဆန်းချီရပ်ကွက် ကျွန်းမွှေးလမ်းတွင် နေအိမ်အပေါ်ထပ်၌ တစ်ဦးတည်းရှိနေသော အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား ရည်းစားဖြစ်သူက ဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်ခဲ့၍ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အပြင် လောင်းလုံးမြို့ရှိ (က) ရပ်ကွက်ရှိ မြို့ဦးထိန်သစ်ကျောင်း၌လည်း ဧပြီ ၁၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆွမ်းစားဆောင်ပေါ်တွင် ပန်းကန်ဆေးနေသူ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် လူငယ်က ကြက်သွန်လှီးသည့် ဓားဖြင့် နောက်ကျောကို ထိုးသတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထားဝယ်ဒေသတွင် ယခုနှစ်အစောပိုင်းမှစ၍ ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ဒေသခံများအကြား ထိတ်လန့်မှု ဖြစ်ပွားနေပြီး နေအိမ်၌ နေထိုင်နေသော်လည်း လုံခြုံမှုအပေါ် စိုးရိမ်နေရသည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted in Crime, NewsTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on ထားဝယ်မြို့ပေါ်တွင် နေအိမ်ပေါ်၌ အိပ်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့်ဝင်ရောက် ထိုးသတ်ပြီး ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွား
ရန်ငြိုးရန်စရှိသူ အမျိုးသားနှစ်ဦး ဓားချင်း ယှဉ်ထိုးရာမှ တစ်ဦးသေဆုံးမှု လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ရန်ငြိုးရန်စရှိသူ အမျိုးသားနှစ်ဦး ဓားချင်းယှဉ်ထိုးရာမှ တစ်ဦးသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင် မြောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ဧပြီ ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊ အောင်သုခပတ်လမ်းနေ ကို… (၂၀ နှစ်)သည် နေအိမ်တွင် ရှိနေစဉ် အိမ်ရှေ့သို့ ၎င်းနှင့် ယခင်က ရန်ငြိုးရန်စ ရှိခဲ့ဖူးသူ ဦး….(၄၆ နှစ်)မှာ ဓားကိုင်ကာ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း တရားလို၏ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းချက်အရ သိရသည်။
ဓားကိုင်ကာ ရောက်ရှိလာသော ဦး…(၄၆ နှစ်)မှာ ကို…(၂၀ နှစ်)အား စိန်ခေါ် စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ စိန်ခေါ်သဖြင့် ကို….(၂၀ နှစ်)မှာ နေအိမ်ထဲရှိ ဓားအားယူကာ နေအိမ်ရှေ့ လမ်းပေါ်သို့ ထွက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ လမ်းမပေါ်တွင် လုံးထွေး သတ်ပုတ်နေစဉ် ကို…(၂၀ နှစ်)အား ဦး…(၄၆ နှစ်)က ဓားဖြင့် ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ ဓားဖြင့် ထိုးခံရသဖြင့် ကို….(၂၀ နှစ်)မှာ ယာရင်အုံ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာဖြင့် လမ်းမပေါ်တွင် လဲကျသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဓားဖြင့် ထိုးခံရသဖြင့် ကို…(၂၀ နှစ်)မှာ လမ်းမပေါ်တွင် လဲကျသွားခဲ့ပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင် နေသူများက ဆေးရုံသို့ လိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းမှာ ရရှိထားသည့် ဒဏ်ရာဖြင့် ဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
“ရန်ငြိုးရန်စ ရှိတဲ့သူနှစ်ဦး လမ်းမပေါ်မှာ ဓားချင်းယှဉ်ခုတ်ပြီး လုံးထွေးသတ်ပုတ်တာ။ နှစ်ယောက်လုံးက ဓားတွေနဲ့ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ၀င်မဆွဲရဲကြဘူး။ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူကိုတော့ ဖမ်းဆီးထားပြီး အမှုဖွင့်ထားပါတယ်”ဟုမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ ဦး…(၄၆ နှစ်)အား လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ဓားထိုးမှု, ဓားဖြင့်ထိုးသတ်LeaveaComment on ရန်ငြိုးရန်စရှိသူ အမျိုးသားနှစ်ဦး ဓားချင်း ယှဉ်ထိုးရာမှ တစ်ဦးသေဆုံးမှု လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
ပခုက္ကူမြို့ အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက်ရှိ စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ပုံအနီးတွင် ၁၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားက ၃၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားအား ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား
ပခုက္ကူမြို့ အမှတ် (၁၁) ရပ်ကွက်ရှိ စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ပုံအနီးတွင် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားက အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားအား ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှု ဧပြီ ၁၇ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၁၇ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်တွင် အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက်ရှိ စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ပုံအနီးရှိ တဲအတွင်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျသေဆုံးနေကြောင်း၊ တိုင်တန်းချက်အရ မြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူများနှင့် အသိသက်သေများ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ကိုသန်းစိုး (၃၅ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ၀မ်းဗိုက်ဝဲဘက်နှင့် ယာဘက်တို့တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်စီ၊ လည်ပင်းဝဲဘက်ပြတ်ရှဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ၀ဲဒူးပွန်းရှ ဒဏ်ရာတစ်ချက်တို့ဖြင့် သေဆုံးလျက် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
သေဆုံးသူအနီးအား စစ်ဆေးရာ Mi Note5 ခဲရောင်ဟန်းဆက်တစ်လုံး၊ အနက်ရောင် ဦးထုပ်အ၀ိုင်းတစ်လုံးနှင့် ကြက်ပေါင်ဖိနပ်တစ်ရန်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့်အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်းအား ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ဖုန်းပိုင်ရှင်မှာ မျိုးခန့် (ခ) ငမျိုးဆိုသူဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မျိုးခန့် (ခ) ငမျိုးကမိမိဖုန်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါဖုန်းအား ည ၈ နာရီခန့်တွင် ထွန်းထွန်းဦး (ခ) နီဂဒိုး (ခ) ဒိုးကြီးက ငှားရမ်းသွားကြောင်း ထွက်ဆိုသည့်အတွက် ထွန်းထွန်းဦး (ခ) နီဂဒိုး (ခ) ဒိုးကြီး (၁၄ နှစ်) အား ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ထွန်းထွန်းဦး (ခ) နီဂဒိုး (ခ) ဒိုးကြီး (၁၄ နှစ်) မှ ကိုသန်းစိုး (၃၅ နှစ်) အား ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ခဲ့သည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထွန်းထွန်းဦး (ခ) နီဂဒိုး (ခ) ဒိုးကြီးက ည ၉ နာရီခန့်တွင် သန်းစိုးနှင့်အတူ အမှိုက်ကုန်းဘက်သို့ စကားပြောစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ သွားခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလတွင် သန်းစိုးက ၎င်းအားရိုက်နှက်ခဲ့သည့်ကိစ္စကို မကျေနပ်၍ အသင့်ပါလာသည့် ခလုတ်ဓားဖြင့် သန်းစိုးအား ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု ပခုက္ကူမြို့မ ရဲစခန်းမှူးထံမှ သိရသည်။
“သေဆုံးသူကတော့ အမှတ် (၁၁) ရပ်ကွက် ၂၃ လမ်းက ကိုသန်းစိုးပါ။ ကျူးလွန်သူကတော့ တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ နီဂရိုး ခေါ် ဒိုးကြီး ခေါ် ထွန်းထွန်းဦး အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ပါ။ အိမ်ချင်းကပ်လျက် မျက်စောင်းထိုးနေအိမ်တွေမှာ နေကြတဲ့ တစ်ရပ်ကွက်တည်းသားတွေပါ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ လူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေး မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ကျူးလွန်သွားခဲ့တာပါ။ ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေ အနေအထားကတော့ လက်နက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ဆရာဝန်ရဲ့ တွေ့ရှိချက်ရော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယူဆချက်ရော စိစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်း ၀ရုန်းသုန်းကား လုံးထွေးသတ်ပုတ်ထားတာ သိပ်မတွေ့ရဘဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကျူးလွန်တဲ့အနေအထားမျိုး တွေ့ရှိရပါတယ်။ အသက် အရွယ်မပြည့်တော့ ကျွန်တော်စခန်းမှူးရဲ့အောက်မှာပဲ ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ ဆက်လက်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု ပခုက္ကူမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး သိန်းဆန်းဦးက ပြောသည်။
လူသတ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ထွန်းထွန်းဦး (ခ) နီဂဒိုး (ခ) ဒိုးကြီး ၀တ်ဆင်ထားသည့် သွေးစွန်းပေနေသည့် အ၀တ်အစားများ သိမ်းဆည်းထားပြီး လူသတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ခလုတ်ဓားအား ၎င်းလွှင့်ပစ်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပက်သက်၍ ပခုက္ကူမြို့မရဲစခန်းတွင် ထွန်းထွန်းဦး (ခ) နီဂဒိုး (ခ) ဒိုးကြီး အား (ပ) ၉၇၂/၂၀၁၈ ၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ဓားထိုးမှု, ပခုက္ကူLeaveaComment on ပခုက္ကူမြို့ အမှတ် ၁၁ ရပ်ကွက်ရှိ စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ပုံအနီးတွင် ၁၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားက ၃၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားအား ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား
ကျောက်မဲတွင် ဌာနဆိုင်ရာ ခရိုင်မှူးအား အငယ်တန်းစာရေးက ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့ရှိ ခရိုင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်မှူးအား အငယ်တန်းစာရေးက ဓားဖြင့်ထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဧပြီ ၁၉ ရက်တွင် သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ခရိုင်မှူး ဦးအောင်ကျော်မိုးသည် (၃၄ နှစ်)သည် ဧပြီ ၁၈ ရက် ညပိုင်းတွင် သောက်စားမူးယစ်ပြီး အိမ်ပြန်လာစဉ် ဇနီးနှင့်စကားများခဲ့ပြီးနောက် ရုံးပေါ်သို့တက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ရုံးပေါ်တွင် ရုံးစောင့်ညတာဝန်ကျ ဦးလွင်ဦးနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာ အငယ်တန်းစာရေး ဦးသိန်းမြင့်ထွန်းက ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေခဲ့သော်လည်း ရန်ပြုသဖြင့် ဦးသိန်းမြင့်ထွန်းက ၁၃ လက်မခန့်ရှိ ဓားဦးချွန်ဖြင့် ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓားဖြင့် အထိုးခံရသူ ဦးအောင်ကျော်မိုးအား ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းမှာ ရရှိသော ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ စကားများပြီး ရုံးကိုထွက်သွားတယ်။ ရုံးမှာ ညစောင့်နဲ့ထပ်ပြီး စကားများတယ်လို့ သိရတယ်။ ရုံးစောင့် ညတာဝန်ကျသူက အိမ်ကို သူ့မိန်းမကို လာခေါ်တယ်။ ရန်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ သွားကြည့်တော့ ဦးအောင်ကျော်မိုး လဲနေတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီရုံးက စာရေး သိန်းမြင့်ထွန်းက ရင်ဘတ်ကို ဖိထားတာတွေ့တော့ ဆေးရုံကိုပို့တော့ ဓားဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးတာဖြစ်တယ်။ တရားခံ သိန်းမြင့်ထွန်းကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူး စိုးထွန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
သေဆုံးသူ ဦးအောင်ကျော်မိုး အလောင်းအား တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ယာဘက်လက်ကောက်ဝတ် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ ၀ဲလက်ဖျံ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ၀မ်းဗိုက်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ ၀မ်းဗိုက်ယာဘက် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်တို့ဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ဓားဖြင့်ထိုးသူ ဦးသိန်းမြင့်ထွန်းအား ဆေးရုံတွင် အသင့်တွေ့ရှိရသဖြင့် မေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံသဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးသူ၏ ဇနီး ဒေါ်ဇင်မေဦးက တရားလိုပြုလုပ် တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သူ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနမှ အငယ်တန်းစာရေး ဦးသိန်းမြင့်ထွန်းအား (ပ)၁၈၂/ ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ အရ အမှုဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on ကျောက်မဲတွင် ဌာနဆိုင်ရာ ခရိုင်မှူးအား အငယ်တန်းစာရေးက ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား
အမျိုးသားတစ်ဦးအား ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီး ဓားဖြင့်ထိုးသည့် လူငယ်သုံးဦးကို ဖမ်းဆီး
၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အုပ်စုဖွဲ့ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်၊ ဓားဖြင့်ထိုးသည့် လူငယ်သုံးဦးအား ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ဧပြီ ၁၇ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဧပြီ ၁၆ သင်္ကြန်အတက်နေ့ ည ၈ နာရီခန့်က စစ်ကိုင်းမြို့၊ ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်၊ ၉ လမ်း ဦးထွန်းနိုင်ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှေ့တွင် မျိုးကိုကို၊ အောင်ကိုကိုနှင့် သူငယ်ချင်းများ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဦးထွန်းနိုင်နှင့် စကားပြောနေစဉ် ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်နေ ထက်မြက်အောင်နှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့မှ ပါလာသော လွှမ်းမိုးဇော်တို့ စကားများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် မျိုးကိုကိုမှ ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေစဉ် ဓာတ်ဆီဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးထွန်းနိုင်၏ သားပြည့်ဖြိုးကျော်သည် ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်လာပြီး မျိုးကိုကိုအား ဓားဖြင့်ထိုးခြင်း ထက်မြက်အောင်နှင့် မိုးကျော်တို့မှ ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ရာ ယာဝမ်းဗိုက်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာနှစ်ချက်၊ ဦးခေါင်းနောက်စိ ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီး ဓာတ်ဆီဆိုင်အနီး ပြည့်ဖြိုးစတိုးလမ်းကြား၌ လဲကျခဲ့သဖြင့် စစ်ကိုင်းဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သဖြင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ (စိုးရိမ်ရ) လူနာအဖြစ် ကုသနေရကြောင်း ရဲမှုခင်းမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။ မျိုးကိုကို(၂၉ နှစ်)၊ ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်အား ဓားဖြင့်ထိုးကာ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့သည့် ပြည့်ဖြိုးကျော် (၁၈ နှစ်)၊ ထက်မြတ်အောင်(ခ)ထက်ကြီး(၁၈ နှစ်)၊ မိုးကျော် (၁၈ နှစ်) ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်တို့အား စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၇၃/၁၈ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၆၊ ၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on အမျိုးသားတစ်ဦးအား ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီး ဓားဖြင့်ထိုးသည့် လူငယ်သုံးဦးကို ဖမ်းဆီး
နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ရန်ပြုခံရပြီး ဓားဖြင့်အထိုးခံရသဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူ လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး
နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ရန်ပြုခံရခြင်းကြောင့် ၁၀ တန်းဖြေဆိုထားသူ လူငယ်တစ်ဦး ဓားထိုးခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တပ်ကုန်းမြို့ ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်နေ ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသူ ၁၆ နှစ် အရွယ် မောင်မှူးပြည့်စုံမှာ မတ် ၃၁ ရက် ည ၉နာရီခွဲ ခန့်က သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ တပ်ကုန်းမြို့အတွင်း ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာစဉ် အုပ်စုဖွဲ့ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသည့် လူငယ်အုပ်စုက လမ်းပိတ်ဆို့ကာ ရန်ပြုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မောင်မှူးပြည့်စုံ၏အစ်ကို ကိုချစ်မင်းဦးက ပြောကြားသည်။
“ခံရတဲ့ဘက်က အုပ်စုမဟုတ်ဘူး။ လေးယောက်ပေါ့။ ၁၀ တန်းဖြေထားတဲ့ ကလေးလေးတွေ၊ တစ်ဖက်အဖွဲ့ကတေ့ အုပ်စုလိုက်ပေါ့။ လူ ၂၀ လောက်ရှိတယ်။ ဆိုင်ကယ်အများကြီးနဲ့ မောင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့။ ကလေး လေးယောက်ကို သူတို့အထဲက တစ်ယောက်က ဓားနဲ့လိုက်ထိုးတာပေါ့ ။ ကျွန်တော့်ညီလေးက ကြောင်တောင်တောင် ရပ်နေတော့ သူခံလိုက်ရတာပေါ့။ ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ ပြေးတော့လွတ်သွားတယ်” ဟု သေဆုံးသူ လူငယ်၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုချစ်မင်းဦးက ပြောကြားသည်။
မောင်မှူးပြည့်စုံမှာ ရင်ဘတ်တွင် ဓားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး တပ်ကုန်း ခုတင် ၁၀၀ ဆေးရုံမှ နေပြည်တော် ခုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသခဲ့သော်လည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးသူ၏ အစ်မဖြစ်သူ မမြင့်မြင့်သိန်းက တပ်ကုန်းမြို့နေ ဖြိုးသီဟ၊ ကျော်ထက်အောင် အပါအ၀င် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား အရေးယူပေးရန် တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လူငယ်သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်ကုန်းမြို့မရဲစခန်းတွင် ပုဒ်မ ၃၀၂၊ ၁၁၄ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း၊ ဓားဖြင့်ထိုးသည့် တရားခံကြွက်နီ (ခ) ထက်ရာဇာနှင့် လူငယ်လေးဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း တပ်ကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမှုတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများမှာ ငါးဦးတည်းမဟုတ်ဘဲ အနည်းဆုံးလူငယ် ၁၅ မှ ၂၀ ဦးခန့်ရှိသည်ဟု သေဆုံးသူနှင့်အတူ ရန်ပြုခံရသည့် လူငယ်များက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်ချက်ဖွင့်ရာတွင်မူ စခန်းမှ ငါးဦးသာ ထည့်သွင်းထားသကဲ့သို့ အခြားသော ရန်ပြုခံရသည့် လူငယ်သုံးဦးကိုလည်း ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်း ကိုချစ်မင်းဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်ကုန်းမြို့မရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အမှုကို တာဝန်ယူစစ်ဆေးနေသည့် စခန်းမှူးမရှိသေး၍ အမှုဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကို ပြောကြားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged ဓားထိုးမှုLeaveaComment on နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ရန်ပြုခံရပြီး ဓားဖြင့်အထိုးခံရသဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူ လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး